Massimiliano Allegri Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa Juventus Kaddib Markii Uu Shalay Kula Guuleystay Serie A – Latest Sports News
Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa shalay markii siddeedaad oo xidhiidh ah ku guuleystay horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A, laakiin maalin kaddib waxa jamaahiirta usoo yeedhay dhaqaaq ka yimid dhinaca tababaraha oo ku saabsan mustaqbalkiisa.
Massimiliano Allegri ayaa la filayey in marka uu xili ciyaareedku dhamaado uu ka tago Juventus, waxaana lala xidhiidhinayey kooxo ay ka mid yihiin Manchester United ka hor intii aan Solskjaer sida rasmiga ah loogu dhiibin iyo Chelsea oo uu jar ka laalaado mustaqbalka tababare Maurizio Sarri.
Sida ay sheegtay warbaahinta Rai Sport tababare Massimiliano Allegri ayaa ogolaaday inuu heshiis cusub u saxeexo kooxdiisa oo uu laba sannadood oo dheeraad ah lasii joogo.
Allegri ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu kulan la yeesho madaxweynaha Juventus, Andrea Agnelli, waxaanay isla qaadan doonaan qodobbada heshiiska uu doonayo tababaraha hore ee AC Milan.
Qandaraaskii hore ee Allegri ayaa waxa uu ku egyahay badhtamaha sannadka 2020, waxaanu xili ciyaareedkii mushahar u qaadan jiray 7 milyan oo Euro, hase yeeshee waxay wararku sheegayaan in laba sannadood oo kale uu qalinka ku duugi doono isaga oo xili ciyaareedkii qaadan doona mushahar dhan 8 milyan oo Euro.
Madaxweyne Agnelli ayaa la sheegay inuu gaadhay go’aanka ah in heshiiska loo kordhiyo tababaraha Talyaaniga ah oo intii uu joogay madxafka kooxda kasoo buuxiyey koobab horyaalka Serie A.